Saturday May 09, 2020 - 12:39:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbixin rasmi ah oo kasoo baxday taliska ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa lagu xaqiijiyay in diyaaraddii dhowaan lagusoo riday degmada Bardaale ee gobolka Baay ay mas'uul ka ahaayeen ciidamada Xabashida Itoobiya.
Ururka Midowga Afrika ayaa qoraal uu saaray isku dayay in uu qiil usameeyo soo riddidda diyaaradda, waxaa warbixinta lagu sheegay in diyaaradda laburburiyay ay si khalad ah ugu dul haadda saldhigga ciidanka Itoobiya ee Bardaale kadibna ciidamadu moodeen in ay isku qarxin rabtay saldhigga!.
Soo duulayaasha AMISOM ayaa qoraalka ay udireen waxa loogu yeero beesha caalamka waxay ku xaqiijiyeen in ciidamada Itoobiyaanka ah ee diyaaradda rayidka ah soo riday aysan katirsaneyn waxa loogu yeero howlgalka AMISOM taas oo ka dhigan in ay iska fogeynayaan mas'uuliyadda khasaarihii ka dhashay diyaaraddii lasoo riday isbuucii lasoo dhaafay.
Kumanaanka kun ee ciidamada Xabashida Itoobiyaanka ah ee xoogga ku jooga Soomaaliya ayaa huwan shaatiga AMISOM balse marmarka qaar ayuu taliska AU iska fogeeyaa in aysan iyaga katirsanayn.
Tusaale ahaan markii ay ciidamada Itoobiya ay isaga bexeen degmooyinka Moqakori iyo Tiyeegloow sanaddii 2016 ayuu taliska AMISOM iska fogeeyay in ciidamadaas ay taliskooda katirsanyihiin, gummeystayaasha hororka ah ee dalka ku sugan ayaa xadgudubyo dhan walba ah ku haya shacabka soomaaliyeed iyagoo shaatiyo kala duwan soo gashaday.
Wasiir Itoobiyaan ah iyo wafdi uu hoggaaminayo oo Hargeysa gaaray.